NapBot yeApple Watch inogadziridzwa pamwe nekuwedzera kwekurara apnea analysis | Nhau dze iPhone
Karim Hmeidan | 10/05/2022 21:00 | IPhone maapplication
Zvakawanda zvakataurwa pamusoro pemikana yatinayo shandisa midziyo yakaita seApple Watch kuona kuti tinorara sei. Data inogona kutibatsira kana tikaona kuti hatina kuzorora zvakanaka. Apple yaisanganisira nzira dzekurara neApple Watch, zvakare ongororo yakavakirwa pamashandisiro atinoita, asi haisi yekuongorora kwekurara sekudaro. Kune izvi isu tine wechitatu-bato maapplication anotitendera iyi yekutarisa. NapBot ndeimwe yadzo uye ichangobva kuvandudzwa nekuwedzera ongororo yekurara apnea…
Chii ichi chinonzi kutadza kufema? Kuti ujekese kuti iyi pfungwa yesainzi inorevei, maererano neMayo Clinic, La Kurara kufema chirwere che kurara mamiriro angangove akaomarara apo kufema kunodzokorora kunomira uye kunotanga. Kana iwe ukaridza ngonono zvine simba uye uchinzwa kuneta kunyangwe mushure mehusiku hwakazara kurara, ungadaro Kurara kufema. Kune zvese izvi, zvakakosha kuti tizive kupererwa nehope sezvo kuchikonzera kurara kwedu “kwenguva dzose” kuvhiringwa. Nekuvandudzwa kweNapBot, zvinotitendera kuziva apnea iyi zvichienderana nezviyero zvekufema kwedu kana SleepFocus inovhurwa muapp.
Uye chakanakisa pane zvese ndecheizvozvo NapBot ndeyemahara uye inotibvumira ongororo yakadzama yekurara kwedu, kuratidzwa kune ambient ruzha, uye pfupiso yegirafu yekurova kwemoyo panguva yekurara. Ehe, kuve nemabasa ayo ese, akadai senhoroondo yekurara, isu tichafanirwa kuita-mu-app kutenga. Iwe unoda kuyedza yakanaka app inoongorora kurara kwako iwe wakarara? Mhanya kurodha NapBot yeIOS, sezvatinotaura, app ine simba iyo pamwe chete neApple Watch yako uchakwanisa kutarisa kuti wakarara sei zvakanaka (kana kuti zvisina kunaka).. Uye kana wanga watoiisa, ivandudze kuti uwane kuongororwa kutsva kwekuvharwa nehope.
NapBot - Kurara uye Nap Trackervakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » NapBot yeApple Watch inogadziridzwa pamwe nekuwedzera kwekuongorora kupnea kwekurara
Apple inogadziridza AirPods, AirPods Pro uye AirPods Max